Home > Archives: Related Posts > Sanad guuradi afaraad ee Capital University
Sanad Guuradi afaraad ee Capital University, Mogadishu, Somalia
27/5/2017 ee bishan May aya waxa lagu qabtay Xaflad si heer sare ah loo soo abaabaulay oo ay kasoo qeyb galeen Maamulka , Macalimiinta , Ardayda, Marti sharaf aad u badan iyo waalidiin looguna dabaal degayay Afar sano guuradii kasoo wareegatay markii la aas aasay Jaamacada Capital ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Dr Ahmed Gacal Arabow, Gudoomiyaha mu’asasada jaamacada Capital oo munaasabada ka hadlay ayaa ku dheeraaday ka hadka faa ‘iidooyinka waxbarashada waxqabadka jaamacada tan iyo markii la aas aasay iyo waliba hiigsiga dhow iyo midka fog ee jaamacadda, waxaana sidoo kale ardayda Soomaaliyeed uu ku dhiiri galiyay sii wadashada iyo sara u qaadista waxbarashada.
Sidoo kale Dr Alas Hassan Mohamed,oo ah madaxa academiyada Jaamacada Capital ayaa isna dhankiisa ka sheekeeyay ahmiyada loo aas aasay Jaamacada iyo Machadka Dr Kadare ee katirsan Jaamacada, waxaana uu sheegay in Jaamacada Capital ay qeyb weyn ka qaadatay sidii Ardayda Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen waxbarasho Jaamacadeed tayo sare leh.
Dr Alas ayaa xusay in Jaamacadu ay leedahay 5 kulliyadood oo ka kooban 13 takhsus iyo 2 machad oo lagu barto english ka iyo maclinimada Sidoo kale dadka goobtaas ka hadashay waxaa ka mid ahaa Dr. Jimcale oo ah hormuudka kulliyadda caafimaadka iyo waliba Eng. Abdinasir oo isna kamid ah macaliinta jaamacada qaybta computer science iyo IT, kuwaas oo ka sheekeeyay qaabka waxbarshada jaamacada iyo sida ay ardaydu ugu faa’iideystaan casharada ay bixiyaan macalimiinta waaya araga ah ee jaamacadda.
Jaamacadda Capital oo ka mid ah Jaamacada ka jira Magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale leh machad lagu barto luqada Englishka oo ay dhigaan Macalimiin takhasusi ah taas oo qeyb weyn ka qaadan karta in ardaydaydu ay si fuduf ula jaan qaadaan qeybaha kala duwan ee jaamacada sida maamulka Jaamacadu ay ka dhawajiyeen.